INyanga epheleleyo ngo-Agasti: Libambe iThuba lokuVela - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
INyanga ePheleleyo nge-3 ka-Agasti kwi-Aquarius iya kuphucula ubuchule bethu bokuyila kunye nobuchule. Kuya kunceda ukuba ukucinga kwethu kuhambe kwaye kusifundise ukukwazi ukuma ngaphandle kwesihlwele! Lo mnyhadala ukhethekileyo wenyanga uya kusikhuthaza ukuba silandele ezethu iindlela kwaye abanye bethu banokude bahambe baye kuthi ga ekudibaneni ngokupheleleyo nesiqhelo ukuze balandele eyona minqweno yabo inzulu. Fumana iimpembelelo zeNyanga ePheleleyo ka-Agasti kuphawu lwakho lwezodiac.
Yintoni umphumo weNyanga ePheleleyo kwi-Aquarius?
Yintoni esinokuyilindela kwesi siganeko senyanga?
I-horoscope yophawu lwakho lwezodiac
Ngomhla wesi-3 ku-Agasti 2020, iNyanga ePheleleyo iyenzeka ngoMvulo we-3 ngo-11:59 A.M. ET kwi-11 ° 46 ukusuka kumqondiso we-Aquarius! -
Ingaba iNyanga ePheleleyo kwi-Aquarius ingaba naliphi ifuthe?
INyanga egcweleyo Aquarius iqaqambisa icandelo lethu lobuhlobo kunye nobudlelwane. Isenza sivuleke ngakumbi kwaye isikhuthaza ukuba sibathande abanye ngendlela yehlabathi. Emva kokuthetha oko, iNyanga ePheleleyo e-Aquarius inokudodobalisa bonke abo baqinisekiswa ngamakhamandela, iibhakoni kunye nezithethe ... Kungumzuzwana ukuba iyasikhulula kwiindibano nakwiimbopheleleko.
INyanga egcweleyo kwi-Aquarius isibiza ukuba sijonge kwikamva, isinika iingcamango ezininzi zokusikhulula kwixesha lethu elidlulileyo, lisikhuthaza ukuba siqhubele phambili, nokuba kuthetha ukwenza ngesibindi!
Xa iNyanga ePheleleyo kwi-Aquarius idalwe, iLanga lizifumana likuLeo kwaye iNyanga ibekwe phambi kwayo (ukuya kwinqanaba elikufutshane kwi-zodiac) kwi-Aquarius.
Yintoni esinokuyilindela kule Nyanga iPheleleyo ka-Agasti?
Ngokujonga esibhakabhakeni ngalo mhla, ngaphaya kwento yokuba iNyanga ikwi-Aquarius, siqaphela ukuba idityaniswe kakubi ngaloo ndlela kuxinzelelo kunye no-Uranus eTaurus. Olu lungelelwaniso ke ngoko luyasibongoza ukuba sizikhulule kwixesha elidlulileyo kwaye sikhuphe amandla angalunganga . Iyakuvula neengqondo zethu kwizinto ezintsha nezinika umdla ebesingekacingi ngazo.
Ukungahoyi iindibano kunye nezimvo zabanye abantu kuya kuba ngamava akhululayo.
INyanga epheleleyo ka-Agasti iya kuvusa izakhono zethu zokuhlalutya kwaye isinike amandla okubuza izinto esele sizamkele ixesha elide. Lo mbono unokwenza imiqondiso ethile yezodiac yoyike, kodwa siyakwenza ngokukhawuleza siqhelane nombono wokukhululeka nokulandela indlela yethu yokwenyani. Ngokwenene, iMars e-Aries eqhagamshelwe kakuhle kwiNyanga ePheleleyo iya kusisikelela ngenkalipho efunekayo yokutshintsha iimeko esingonwabanga ngazo.
Beka iiPsychics zethu kuvavanyo apha kwaye uthathe inyathelo elikufutshane ekufumaneni ikamva lakho
I-horoscope yakho yeNyanga epheleleyo ngo-Agasti
Wonke umntu uyachatshazelwa kolu lungelelwaniso kodwa elona lichaphazeleka kakhulu iimpawu zodiac ngo-Agasti zi; Aquarius, Leo, Scorpio, Taurus, Libra, Sagittarius, Aries, Gemini.
Nceda qaphela: Uya kuba novakalelo ngakumbi kwesi sehlo senyanga ukuba wakho uphawu olunyukayo iwela komnye wale miqondiso.
Cofa kwiintolo ezingezantsi ukuze ufumane i-horoscope yakho. Usenokuthanda: Yethu Ikhalenda yeNyanga epheleleyo yowama-2020 .
INyanga ePheleleyo ikutyhala bagqame kwiqela. Uya kukulungela ukuhamba imayile eyongezelelweyo ukukholisa abantu obakhathalelayo.
Beka umsebenzi wakho kuqala
INyanga ePheleleyo iyakunceda ukuba tyhala phambili ngamaphulo akho obuchule. Uya kuzifumana usiba nobuchule ngakumbi kwaye uya kufuna ukubonisa umbono wakho wezinto.
Uya kuzifumana usenza izinto ezibangela umdla kuhambo lwakho. Awuyi kuthandabuza ukuphuma kwindlela ebethiweyo ngenxa yokufuna ukwazi. Ukuba awukho eholideyini, uya kufumana eminye iminyhadala yenkcubeko ukuhambisa ixesha.
Gxila kwiimali zakho
Esi siganeko senyanga siya kukubizela jonga iiakhawunti zakho kunye nokulungelelanisa imali yakho ukuba kuyimfuneko. Kuya kufuneka uhlalutye ii-asethi zakho kunye neendleko zakho ezinokwenzeka.
Fumana ikamva lakho lothando NGOKU ❤!
Ungu ukuphuphuma ngamandla kwaye uzama ukuzola. Uya kutsalela ingqalelo kuwe, enokucaphukisa okanye ukuvuselela umona. Hlala ngokwendalo!
Sibonise ukuba ungubani kanye kanye
Uya kuba namandla oku phuma kwiqokobhe lakho kwaye oko kunokothusa abantu abakungqongileyo. Ukuba nesibindi ngakumbi kukufanele!
Idume kakhulu kunakuqala
Ubudlelwane bakho buya kukhula ngakumbi kwaye uya kufumana ifomula yomlingo ukuba igqame kwimisebenzi yakho yokuzonwabisa. Umdla wakho uyakhuthaza kwaye wenza abantu bafune ukuba kufutshane nawe.
Esi siganeko kunokwenzeka ukuba kukwenza ube nomsindo, ngakumbi nosapho lwakho, abantwana bakho kunye nomnye umntu obalulekileyo. Awubonakali uhamba kwicala elinye kwaye uyasokola ukuqonda iminqweno yomnye nomnye.
Yintoni elindele umqondiso wakho wezodiac? Fumana apha ❤!
Ubomi obukhulu bentlalo
INyanga Egcweleyo ivuselela icandelo lakho lobudlelwane. Zininzi iingxoxo ezikungqongileyo, ezityebisayo nezivuselelayo. Ngokufanayo, musa ukuthandabuza ukuthetha. Umyalezo omalunga nelungiselelo okanye iindaba ezivela kumhlobo nazo zinokufikelela kuwe.
Gcina iliso kwiiakhawunti zakho
INyanga ePheleleyo inokusikhanyisela ngemeko yezemali kwaye iindaba zinokukushukumisa kancinci ukuba khange uziphathe kakuhle izinto mva nje. Lixesha lokuba uthathe inyathelo coca imali yakho. Ngoxa usekhefini, gcina uqingqo-mali lwakho engqondweni.
Lo mhla uzisela okuninzi amandla, isibindi kunye neminqweno eyahlukeneyo. Uya kubusebenzisa ngokupheleleyo ubomi kwaye uya kwenza unothanda, nokuba oko kuthetha ukungabakholisi abanye.
Vumela ukucinga kwakho kuhambe
Uya kuzibeka phambili kwaye tsalela ingqalelo kubuchule bakho kunye neetalente zobugcisa. Ungalwela kwelinye icala ukunceda abona babuthathaka kwiqela lakho.
Fumana iingcebiso zokomoya ngakumbi NGOKU ❤!
18:18 Mirror Hour: Impumelelo Yeyakho!
Yeiayel, Guardian Angel efanekisela Uzuko kunye neThamsanqa